QEEXIDA BARADHADA BARBARAN "TAISIYA", SIFOOYIN FAAHFAAHSAN, SAWIRO - MAQAALLO
Ballanqaaday baradho Dutch ah Taisiya: sharaxaadda kala duwan, astaamaha, sawirrada
"Taisiya" waa noocyo kala duwan oo Dutch ah, oo dhawaan si rasmi ah loogu aqoonsaday Ruushka, laakiin caan ka ah adduunka oo idil.
Baradho hore waxay leedahay dhalid aan horay loo arag, halka tayada dhadhanka ee digriiga si joogto ah u sarreeya. Baradhadu waa la kori karaa beeraha iyo beeraha gaarka loo leeyahay, sidoo kale waxay ku haboon tahay wax soosaarka warshadaha.
Faahfaahin faahfaahsan ee kala duwan, sifooyinka ugu muhiimsan iyo waxyaabaha gaarka ah ee beerashada, iyo sidoo kale hirgelinta cudurrada iyo hababka loo xakameynayo cayayaanka ayaa laga wada hadlay qodobka.
Magaca dugsiga Taisiya
Sifooyinka guud Kala duwanaanta mira dhalinta dhexdhexaad ah ee dhalidda sare
Wakhtiga uurka 70-80 maalmood
Mawduucyada Starching 12-16%
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 100-130 gr
Tirada digriiga duurka 9-15
Yield ilaa 430 c / ha
Tayada macaamilka dhadhan weyn, heerkul caadi ah
Soo kabashada 96%
Midab daruuf Jaale
Gobollada la doorbido Central, Central Black Earth, Volga-Vyatka, Waqooyi Galbeed, Ural
Cadaadiska cudurada aad u adkaysi u leh rhizoctoniosis, miraha, Y-virus iyo Ynn-virus, si dhexdhexaad ah u adkaata in ay qolof, dhicii goor dambe
Noocyada sii kordhaya Faafinta wax of beerto waxaa lagu talinayaa, noocyo kala duwan u dulqaadan abaarta iyo heerkulka sare
Asalka Solana (Jarmalka)
digriiga qiyaasta dhexdhexaadka ah, miisaankeedu yahay 100 illaa 130 g;
oval ama oval-style oval;
digriiga caanaha ah oo isku dhafan miisaanka iyo cabbirka;
diirka ayaa ah midab huruud ah, labis, dhuuban, oo siman;
indhaha waa mid aad u muuqda, yar yar, waa la ogaan karaa, aan la garanayn;
saxarka ku yaala gooyuhu waa caddaan;
celceliska macmacaanka celceliska inta u dhaxaysa 12 ilaa 16%;
nuxurkiisu sarreeya ee borotiinka iyo asiidhyada amino oo qiimo leh
Jadwalka hoose waxaad ku arki kartaa xogta ku saabsan inta miisaanka celceliska ee digriiga ganacsiga ee noocyo kala duwan oo baradho ah:
Magaca dugsiga Miisaanka Tuberka
Juvel 80-150 g
Kiranda 90-175 g
Magician 75-150 g
Zhuravinka 90-160 g
Kala duwanaanta baradhada "Taisiya" waxaa loola jeedaa miiska bartamihii hore iyo wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda. Xilliga dhirta laga bilaabo 70 ilaa 90 maalmood. Digriiga waa la isku xidhxidhay, xaaladaha cimilada ee wanaagsan, dhalidda ayaa aad u sarreeysa, ilaa 460 sentitir halkii hektar.
Isbarbardhig dhirta Taisia ​​leh noocyo kale oo isticmaalaya xogta miiska:
Taisiya ilaa 430 c / ha
Gabadh gabar ah 170-300 c / ha
Nasiib wacan 420-430 c / ha
Latona ilaa 460 c / ha
Vineta ilaa 400 kg / ha
Meteor 200-400 sentners / ha
Baradhada la goostay ayaa si fiican loo kaydiyaa, muddo dheer iyada oo aan laga lumin hantida ganacsiga. Kala duwanaanta ku habboon iibka, gaadiidka waa suurtogal.
Buunku waa dhexdhexaad, toosan, leh laamo dhexdhexaad ah. Dhismaha mass cagaaran waa dhexdhexaad ah, caleemuhu waa yar yihiin, fudud, cagaar madow. The corolla waa iswajin, ka soo ururiyey cad oo waaweyn, ubax degdeg ah-dhicin.
Miraha yar, inta badan ma ay u bislaadaan. Nidaamka asaasiga ah si fiican ayaa loo horumariyey, 15-20 baradhada la doortay waa la xirxiraa duur kasta.. Waxaa jira waxyaabo yaryar oo yaryar, digriiga fool xun ayaa la sameeyaa aad u dhif ah.
Daryeelka beeraha iyo beeraha way fudud yihiin. Waxaad ku baran kartaa baradhada abuur ama digriiga. Marka dhalmada abuurka lagu taliyo habka seedling, waxay yarayn doontaa xilli sii kordhaya. Baradhadu waxay ku beeran jireen safaf dhaadheer, oo la doorbidayo ciidda iftiinka cagaaran. Waraabka faleebo waa suurad wacan, iyo sidoo kale 1-2-fold oo bacarimiso dhismooyin macdanta ama arrin organic. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo bacrimiyo, sida iyo goorta la bacrimiyo, sida loo sameeyo marka la beero, akhriso maqaallada dheeraadka ah ee goobta.
Qodashada beerista geedi socodka xiga waa la soo ururiyaa si madaxbannaan, waxaaba ku dhicin wax khasaare ah.
Caleenta baradhada "Taisiya" iska caabida cuduro badan oo khatar ah: kansarka baradhada, nematode dahab dahab ah, fayrasyo ​​kala duwan: Alternaria, Fusarium, Verticilliasis, Rhizoctoniosis.
Markaad ka soo baxdo abuur, muuqaalka lugta madow waa suurtagal. Xaaladaha qoyaanka ee xad dhaafka ah, caleemaha ama caleemaha sare ayaa kobcin kara. Cadaadiska cillad goor dambe waa dhexdhexaad.
Isticmaalayaashu waxay xusuusiyaan dhadhanka wanaagsan ee baradhada. Noocyo badan oo hore u ma aha mid aad u dhadhan fiican, "Taisia" waa ka reeban tahay farxad. Digriiga ma aha biyo biyo ah oo aan qallajin, oo buuxa, ku haboon diyaarinta suxuunta kala duwan. Macmacaanku waa mid dhexdhexaad ah, taasoo ka dhigaysa baradho badan. Digriiga ma karkarin, adoo ilaalinaya qaab nadiif ah. Goynta iyo karinta baradhada ma madow. Khudaarta cagaaran waxay noqon kartaa qoto dheer-la shiilay, la kariyey, la dubay, cufan, loo isticmaalo in lagu sameeyo baradhada shiidan.
Baradhada kala duwan ee "Taisiya" waxay caleemo saartay geedka Nederland. Hantidhawrka ayaa ah shirkad caan ah oo loo yaqaan 'Solana', oo ku takhasusay is-gaarsiinta casriga casriga ah.
Ku diiwaangashan Diiwaanka Gobolka ee Ruushka ee 2015, ku talinaynaa beerista Central, Central Black Earth, Volga-Vyatka, gobollada waqooyi-galbeed, Ural. Baradhada "Taisiya", sababtoo ah sifooyinka ay ku habboon tahay beeraha iyo beeraha hiwaayadda, waxaa suurtagal ah in ay koraan goobaha warshadaha.
Baradhadu waxay u fiicanyihiin iibka, weyn, xitaa digriiga waxay leeyihiin tayo suuqeed oo wanaagsan. Sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah, soosaarka digriiga badeecadda ma hoos u dhaco 91%.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kala duwanaanta waxaa ka mid ah:
Nafaqada sare ee nafaqada;
Baasaboor hore loo sameeyey;
dhalid heer sare ah;
baradhada la goostay ayaa si wanaagsan loo hayaa;
Waxyaalaha abuurku maaha mid aan hoos u dhicin;
dulqaadashada isbeddelka heerkulka;
difaaca jirka ee cudurada waaweyn.
Kala duwan ayaa si fiican loo hayaa, maxaadna tahay wakhtiga iyo heerkulka, wixii dhibaatooyin ah ee laga heli karo maqaalada boggayaga. Sidoo kale akhri sida loo kaydiyo baradho xilliga qaboobaha, balakoonka, qaboojiyaha, sawir qaadaha, diiray.
Dhibaatooyinka kala duwan ee aan la arki karin. Si loo kordhiyo dhalidda, waxaa lagu talinayaa in si taxadar leh loo doorto abuurka leh daaweyn hordhac ah, diyaarinta waraabka iyo dharka sare.
Sida noocyo kale oo hore ah, Taisia ​​badanaa waxay ka soo baxdaa abuur. Goosashada wanaagsan ee habkan waxaa la heli karaa oo kaliya hal sano, xilli hore, digriiga waxay noqon doonaan kuwo yaryar, laakiin waxay ku habboon yihiin wax beerto.
Waqtiga dhalmada by digriiga, wax abuur ah waa la kariyaa, la qalajiyey, loola dhaqmo kiciyaasha kobaca. Baradhadu waa inay noqdaan kuwo biqilka ka hor intaan la beeri.. Wixii beerista ee tijaabooyinka la soo xulay leh ugu adag ee aan caleemaha dhalaalaya.
Digriiga loo beeray wuxuu u baahan yahay marka ciidda ay u kululaan ilaa 10 digrii. Dib u dhigo beeritaanka laguma talin, guga ciidda waa la buuxiyaa qoyaan dabiici ah, damaanad qaadka koritaanka saaxiibtinimo ee baradho. Humus iyo qoryaha qoryaha waxaa lagu soo bandhigay ciidda. Baradhadu waxay ku bexeen meel fog oo ah 20 cm midba midka kale, farqiga safka waa 60 cm.
Baradhadu waa dareen qoyan. Xilliga roobka, muuqaalka kore ee kalluunka waa suurtagal, abaaro dheer ayaa yaraynaya tirada digriiga, waxay u jeedsadeen inay yaraadaan. Xulashada ugu habboon waa habka nidaamka waraabka waraabka oo hagaya heerka qoyaanka.
Qaxwaha daaqa ayaa ka badbaadiya istaabashada biyaha. Inta lagu jiro xilliga beerto, 1-2 jeer ayaa kudhuftay, halka burburinta haramaha. Akhri sidoo kale sida loo abuuro baradhada iyada oo aan la haynin iyo jaridda dhirta.
The digriiga ugu horeeya waa la jari karaa 45 maalmood ka dib markii laga beerto. Laakiin dalagga ugu muhiimsan waa in la goosto dhammaadka xilli sii kordhaya, waqtigaan barafku wuxuu noqdaa mid fiican oo faa'iido leh.
Mashiinka, iyo sidoo kale isticmaalka kiimikooyinka kale ee beerista dalagyada xididada, waxay leeyihiin labada taageerayaal taageersan iyo kuwa ka soo horjeeda isticmaalka kiimikada.
Akhri boggayaga oo dhan wixii ku saabsan fungicides iyo herbicides, isticmaalka iyo waxyeellada dhirta la beeray.
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu baraarujiyo baradhada. Boggayaga waxaad ku baran kartaa tiknoolajiyada Hollandka, waxaad ku baran kartaa macluumaad badan oo ku saabsan koritaanka cawska, bacaha, foostooyinka, sanduuqyada.
Kala duwan ayaa ku filan in ay u adkaysato cudurada ugu weyn ee Solanaceae: kansarka baradhada, rhizoctoniosis, spot caleen, fayrasyo ​​kala duwan, nematode dahab dahab ah. Xaaladaha aan fiicnayn, waxaa suurtagal ah in qolofta caadiga ah, xididada ama kalluunka cirridka, iyo lugta madow ay waxyeelleyn karto. Laga soo bilaabo dhirta dabaylo goor dambe waxay kaydisaa koriinkedii hore. Ujeedooyinka ka hortagga, duurka ayaa lagu buufin karaa xalka aqueous of daroogada-ka kooban yahay.
Xilliga xagaaga, baradho ayaa saameeyn kara aphids, caarada caarada, kuwa lamid ah Colorado. Dhiirigelinta jaridda dhirta ayaa caawin doonta wakhtiga dhirta ama googoynta ciidda. Haddii ay dhacdo dhaawacyo aad u daran, cayayaanka ayaa loo isticmaalaa aerosols. Si looga hortago muuqaalka dabiiciga ah, abuur waa la kariyaa, ciidda waxaa lagu waraabiyaa fungicides.
Baradho "Taisiya", sharraxaadda noocyada kala duwan ee aan ka baranay korka waxaa lagu muujiyay sawirrada soo socda:
"Taisia" - Waa horyaal run ah ee dhalidda ee kooxda ee baradho dhexdhexaad ah hore. Kala duwan yaryar, laakiin aad u balanqaad, sannad kasta waxay qaadataa taageerayaal badan oo dheeraad ah.
Waxa kale oo aanu kuu soo jeedinaynaa in aad barato noocyo kale oo leh noocyo kala duwan oo macquul ah:
Taageero Hore u bislaaday Gaar ahaan hore
Beeraha Bellarosa Innovator
Minerva Timo Handsome
Kiranda Guga Haween Maraykan ah
Juvel Impala Muuqaalka
Zhukovsky hore Colette Vega